RASMI: Juventus oo heshiis cusub ka saxiixatay laacibkeeda khadka dhexe ee reer Bosnia Miralem Pjanić – Gool FM
RASMI: Juventus oo heshiis cusub ka saxiixatay laacibkeeda khadka dhexe ee reer Bosnia Miralem Pjanić
Dajiye August 22, 2018
(Juventus) 22 Agoosto 2018. Juventus ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay heshiis cusub ka saxiixatay laacibkeeda khadka dhexe ee reer Bosnia Miralem Pjanić.
Bianconeri ayaa ka saxiixatay Miralem Pjanić heshiis cusub ee gaarsiisan ilaa iyo 2023, kadib markii uu si xoogan ugu dhawaaday inuu ugu dhaqaaqo mid ka mid ah kooxaha ugu waaweyn ee qaarada yurub.
Miralem Pjanić oo yimid kooxda Juventus mudo laba sano kahor, gaar ahaan tan iyo markii uu Paul Pogba u dhaqaaqay kooxda Manchester United, wuxuu muhiim ka noqday khadka dhexe kooxda Bianconeri, wuxuuna awooday inuu caawiyo 17 gool.
Manchester City ayaa xiiso u qabtay inay lasoo saxiixato Miralem Pjanić suuqan xagaaga, lakiin Juventus ayaa dalbatay aduun dhan 90 milyan oo euros si ay u fasaxdo.
Laakiin saraakiisha kooxda Sky Blues ayaa iska diiday in qiimo intaas gaarsiisan ay kula soo saxiixdaan laacibka reer Bosnia ee Miralem Pjanić, taasoo keentay in ugu dambeyn ay Juventus ka saxiixato heshiis cusub uu waqti dheer ku sii joogayo kooxda.
Liverpool oo garaacday 10 cayaariyahan oo kooxda Crystal Palace ah kulankii ugu dambeeyay cayaaraha Premier League Todobaadkan+SAWIRRO
Laacibkii hore kooxda Liverpool Michael Owen oo si weyn u amaanay qaab ciyaareedka Salah